Mahatsiaro Ny Taloha Ny Ray Aman-dreny Noho Ny Fampidirana Ny Lalao Nintendo Ao Anaty Boky Fianarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2015 8:04 GMT
Rafitra Solosaina Nintendo Family (Famicom). ISary tao amin'nymage from Wikipedia.
Niteraka resabe manerana ny media sosialy ny vaovao momba ny lalao Nintendo Famicom, nivoaka voalohany tamin'ny taona 1983 ary ampianarina ankehitriny eo amin'ny fampianarana ara-tsosialy Japoney .
Nahazo re-tweet (fizarana indray ny sioka) 32.000 ny lahatsoratra nalefan'ilay mpisera Twitter @moriteppe manambara ny vaovao :
Kilasy faha-enina ny zanako-vavy. Raha nahita ny kilalaoko taloha izy, hoy izy: “Famicom ity!” Hoy aho hoe: “mbola kely loatra ianao ka hahare momba ny Famicom.” Ary hoy izy: “Eny tokoa, fantatro ny momba ity. Nianatra momba izany tao amin'ny kilasy fianarana ara-tsosialy izahay!”
INONA A? Mianatra momba ny Famicon amin'ny KILASY FIANARANA SOSIALY izy ireo???
Mitana toerana manokana eo amin'ny kolontsaina pop Japoney ny lalao orizinaly Nintendo.
Manakaiky ny 62 tapitrisa amin'ity lalao elektronika mpitari-dalana, antsoina hoe Famicom amin'ny teny Japoney ary amidy amin'ny marika ara-pialam-boly Nintendo (Nintendo Entertainment System (NES)) any amin'ireo firenena miteny Anglisy no lafo nanerana izao tontolo izao hatramin'ny nitsaharan'ny famokarana azy tamin'ny taona 1993.
Super Mario Bros. Nanomboka voalohany tao Japan tamin'ny Rafitra ara-Solosain'ny Fianakaviana, marika Nintendo, namidy tamin'ny marika NES ivelan'i Japan. Pikantsary avy amin'ilay mpisera Youtube Pikachu.
Hoan'ny olon-dehibe Japoney maro eo amin'ny faha-efapolo taonany izay manan-janaka ankehitriny, mampatsiahy ny taloha tamin'ny fahazazana nandritra ny taonan'ny fanantenana, tamin'ny firoboroboan'ny “bubble (tapoaka)” nandritra ny taompolo 1980 ny Famicon.
Na dia talohan'ny “sioka malazan'ny @moriteppei tamin'ny volana lasa aza, mpisera iray hafa nahatsikaritra ny fampidirana ny Famicom tao anatin'ny boky fianarana fototra tamin'ny Aprily, tamin'ny fiandohan'ny taom-pianarana tao Japana.
Nitondra mody ny boky fianarany ara-tsosialy vaovao ny zanako vavy omaly. Ao amin'ny fizarana miresaka ny fomba fiainan’ny olona taloha ahitana sarin’ireo ankizy milalao Famicom . Hoan'ny ankizy tamin’izany andro izany, ao anatin'ny fomba fiainan'ny olona [fahiny] ny Famicom. Azo antoka fa mampanembona izany…
Raha manembona ireo ray aman-dreny, dia tsy maintsy miatrika ny zava-misy ihany koa izy ireo fa ny fahazazan'izy ireo manokana tamin'ny taona 1980 tao Japana dia mitovy amin'ny “tahaka ny vakoka efa ela” eo amin'ny fijerin’ny ankizy iray amin'izao taona 2015 izao .
Mahafinaritra, nofaritana tokoa tao amin'ny boky fianarana Kilasy faha-telo ho toy ny “zavatra avy amin'ny fahazazan'ny ray sy reninao” ny Famicom“. Tsy mampino ahy. Heveriko fa efa ela izany, saingy mahatonga ny Famicon hitovy amin'ny vakoka fahiny ny sary [ao amin'ny boky fianarana]. Vinanio anie hoe tahaka ny ahoana ny iheverantsika ny taona 1980 amin'izao fotoana izao.
Mitovy amin'ny kilalao fahagola ny lalao orizinaly Famicom:
Mianatra momba ny Famicom izy ireo… ao amin'ny kilasy fianarana ara-tsosialy? Tokony ampianarina toy ny “iray amin'ireo lalaon'ny ankizy nampiasaina fahiny ny Famicom” tahaka ny milalao tandrimo (beigoma) na milalao karatra (menko).
Nanomboka tamin'ny taona 1889 ihany koa ny Nitendo ao Kyoto, manamboatra karatra filalaovana hoan'ny ankizy.
Menko karatra filalaovana hoan'ny ankizy, toa tamin'ny 1920 na 1930 tany ho any. Sary tao amin'ny Wikipedia.
Mamintina ny fotoana ilay mpisera Twitter @azemin :
Nampidirina tao anaty boky fianarana ho toy ny ampahan'ny tantarantsika ny Famicom. Manontany tena aho raha mety mihevitra ireo olona lehibe tamin'ny filalaovana Nintendo fa efa zava-dehibe ny fandraisana ny Famicom hitovy sata amin'ny olo-malaza ara-tantara. Hoan'ireo ankizy mpianatra sekoly fanabeazana fototra, tsy kilalao ny Famicom, fa zavatra tsy maintsy ianaran'izy ireo any am-pianarana. Mahatalanjona tokoa ny fotoana iainantsika.